Dabiiciga (100%) Dhirtada, Soosaarka Dhirta, Soosaarayaasha Dhirta, Iibka - Medicinerawmaterials.com
Dhagax cagaaran > Products > Soo Bixinta Dhirta
Our Soo saarista dhirta waa walxo laga soo saaray ama laga farsameeyay dhirta (gebi ahaan ama qeyb geedka ah) iyadoo la isticmaalayo dareeraha ama habab ku habboon. Waxaa loo isticmaali karaa dawooyinka, cuntada, caafimaadka, quruxda iyo warshadaha kale.
Waxaan bixin karnaa ugu yaraan 1,000 nooc soosaarka dhirta qiimaha ugu fiican. Waxyaabaha la isku qurxiyo, daryeelka maqaarka, wax soo saarka quruxda, cuntada caafimaadka, nafaqada dheeriga ahi waxay ka dhigi kartaa sida ugu fiican ee tayadeena ah soo saarista dhirta.
Liiska Soo Saarida Dhirta
Liiska Waxyaabaha Botanical
Kappaphycus Alvarezii Soosaara
Soosaarida Budada Miraculin
4: 1 ilaa 20: 1
Saliida Ubax ee Arnica Montana
Budada digirta pea
Mushroom Tremella Fuciformis…
Warbixiinta Lingonberry (Vaccinium…
Our soosaarista dhirta waa dhir laga soo dheegtay. Marka la eego isticmaalka badeecada kama dambaysta ah ee la soo saaray, iyada oo loo marayo soo saarista jirka iyo habka kala-saarista, soosaarista dhirta waxaa lagu farayaa in mid ama ka badan la helo maaddooyinka dhirta geedaha urursan iyada oo aan la beddelin qaab dhismeedka walaxda firfircoon. Marka loo eego qaybaha kala duwan ee dhirta la soo saaray, strontium, acid, polyphenols, polysaccharides, terpenoids, flavonoids, iyo alkaloids ayaa la sameeyay; iyadoo loo eegayo astaamaha kala duwan ee iyaga ka mid ah, waxaa loo qaybin karaa saliidda cuntada, shubka, budada, muraayadaha indhaha iwm.
Tusaale ahaan, alkaloids-ka waa nooc adag oo isugu jira nitrogen-ka kooban iskudhaf dabiici ah oo leh dhaqdhaqaaqyo jireed oo gaar ah iyo saameyn caafimaad. Tusaale ahaan, ephedra waxaa ku jira ephedrine oo loogu talagalay daaweynta cudurka neefta, hembane-na waxaa ku jira hyoscyamine oo loogu talagalay xanuunka loo yaqaan 'antispasmodic analgesia'. Glycosides waxay ka kooban tahay isku darka sonkorta iyo walxaha aan sonkorta lahayn. Wadajirka glycosides wuxuu kujiraa qaybta sonkorta halka noocyada kaladuwan ee aglycones ay leeyihiin dhaqdhaqaaqyo jireed oo kaladuwan iyo shaqooyin badan. Tusaale ahaan, caleemaha dhijitaalka ah waxaa ku jira glycoside wadnaha ah oo leh xoojinta wadnaha, ginseng waxaa ku jira ginsenosides kuwaas oo awood u leh inay qiiqaan Qi, dhiirrigeliyaan soo saarista candhuufta iyo yareynta xasilloonida maskaxda iyo xasilloonida jirka.